Donald Trump oo saxiixay amar madaxwayne oo ka dhan ah shirkadaha baraha bulshada – Radio Damal
Donald Trump oo saxiixay amar madaxwayne oo ka dhan ah shirkadaha baraha bulshada
Madaxwayne Donald Trump ayaa saxiixay amar madaxwayne oo looga gol leeyahay in meesha looga saaro qaar ka mid ah shuruucda lagu difaacayo shirkadaha baraha bulshada.
Waxuu amarkan siinayaa hay’adaha fuliya sharci in tallaabo sharci ay ka qaadaan shirkadaha baraha bulshada sida facebook iyo shirkadda Twitter-ka.
Madaxwayne Trump ayaa markii uu saxiixayay amarkan ku eedeeyay shirkadaha baraha bulshada “awoodo aan lala xisaabtamin”.
Amarkan cusub ee uu madaxwaynaha saxiixay ayaa waxaa la filayaa in uu la kulmo caqabado dhanka sharciga.
Mr Trump ayaa si joogta ah ugu eedeeynayay shirakadaha baraha bulshada inay faaf-reeb ku samaynayaan codadka iyo fikradaha asliga ah.
Faqrada 230 ee sharcigani, ayaa shirkadaha baraha bulshada waxa aysan qaadayn masuuliyadda qoaraalada ay soo dhigaan dadka barahooda isticmaala, balse waxay hawada ka saari karaan” qoraalada aflagaadada iyo anshax xumada ku saabsan.